Jamie Carragher Oo Markale Gary Neville Ku Bahdilay Hadal Uu Hore U Sheegay Iyo Hooska Tuurka Saaxiibada Sky Sports Oo Sii Socda. - Gool24.Net
Intii ayna bilaamin ciyaartii Liverpool iyo Manchester United ee Anfield, Gary Neville ayaa ka soo muuqday kamarada Jamie Carragher uu ka duubayay darbiga lagu xardhay koobabka Reds wuxuuna Neville markaas farta dhexe ee aflagaadada loo tixgaliyo uu ku soo taagayay Jamie Carragher.
Waxaase Gary Neville loogu maadsaday markii uu ku qaldamay qolka labiska Liverpool halkii uu ka doonayay in uu ka booqdo qolka labiska Manchester United si uu dhiiro galin u siiyo.
Haddii uu markaas Jamie Carragher baraha bulshada ku soo share-gareeyay muuqaalkaas isla markaana uu falcelin badan keensaday, waxa uu markale Carragher bartiisa twitterka soo dhigay muuqaal uu doonayo in Gary Neville laftiisa uu isku bahdilo.
Hadalka uu Jamie Carragher soo qaatay waa mid uu Gary Neville shan bilood ka hor uu ku saadaaliyay in Manchester United ay marklae koobka Premier League ku guulaysan doonto ka hor inta ayna Liverpool ku guulaysan.
Hadalkan ayuu Gary Neville ku soo beegay guuldaradii Manchester United ka soo gaadhay Liverpool iyo waliba in United ay hadda 30 dhibcood ka hoosayso kooxdiisii hore ee Reds.
Haddaba iyada oo muuqaalka Gary Neville ee saadaashii shan bilood ka hor ee Premier League ee uu Carragher soo qaatay aad halka hoose kaga bogan karto, aan qoraal ahaan idiinku soo koobno.
Barnaamijkii “The Big Season Debate” ee Sky Sports ka baxay shan bilood ka hor ayuu Carragher ka soo qaatay Garry Neville oo si adag ugu doodaya: ” Way dhici doontaa, waxaan idiinku damaanad qaadayaa sida maalinta in Manchester United ay markale guulaysan doonto, wax dhibaato ahi kama jirto way ku guulaysan doonaan”.
Gary Neville oo doodiisii shan bilood ka hor ku sheegay hadalka uu sida gaarka ah Carragher ugu maadsaday hadda ayaa yidhi: “Iyagu (Man United) horyaalka ayay ku guulaysan doonaan- Fikrad ahaantyda, waxay ugu dhawaan horyaalka ku guulaysan doonaan ka hor Liverpool , anigu bilaa ixtiraam ma ihi”.
Jamie Carragher iyo Gary Neville oo kaftan kulul iyo hoos ka tuur cajiib ah aan wax naxariis ah iskugu muujin ayaa haddana isku shaqo ku ah Sky Sports iyaga oo barnaamijyadooda ka dhigay kuwa loogu daawashada badan yahay.
Laakiin Jamie Carragher ayaa hadda u muuqda mid jab badan la helay xidigii hore ee Man United ay ku soo xifiltameen ee Gary Neville.
Halkan ka daawo muuqaalka kooban ee uu Jamie Carragher bartiisa twitterka soo dhigay si uu Gary Neville ugu maadsado saadaashii uu shan bilood ka hor bixiyay ee uu Man United kaga saraysiinayay kooxdiisii hore ee Reds.
Jamie Carragher iyo jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa hadda sugaya in ay arkaan kooxdooda Reds oo markii ugu horaysay koobka Premier league ku guulaysanaysa 30 kii sanadood ee ugu danbeeyay inkasta oo ay hore 18 jeer koobkan u soo qaadeen.